जो राष्ट्रिय पञ्चायतमै बहुदल माग्थे- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जो राष्ट्रिय पञ्चायतमै बहुदल माग्थे
चैत्र २४, २०७४ विरोध खतिवडा
काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अथक योद्धा एवं जनप्रिय नेता जागृत भेटवाल हामीबाट बिदा हुनुभएको छ । उहाँ चितवन र म मकवानपुर छिमेकी जिल्लाको भए पनि हाम्रो चिनजान काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट भएको थियो ।
विद्यार्थी राजनीतिसँगै उहाँ पत्रकारितामा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । २०३६ सालको आन्दोलनको समयमा उहाँ ‘प्रकाश’ साप्ताहिकमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला देखिकै उहाँसँंगको सामिप्यता उहाँको जीवनकाल पर्यन्त रहिरह्यो ।
पञ्चायती शासनकालमा हामी भूमिगत राजनीतिमा थियौं । २०४३ सालमा पार्टीले जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा उठाएर पञ्चायतमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लियो । त्यही नीति अन्तर्गत उहाँ चितवनबाट र म मकवानपुरबाट उम्मेदवार बन्यौं । मकवानपुरमा म र रूपचन्द्र विस्ट र चितवनमा भेटवालजी नेकपा संयुक्तका भीमबहादुर श्रेष्ठसँग मिलेर चुनावमा उठेका थियौं । त्यसबेला पार्टीले ३२ उम्मेदवार विभिन्न स्थानबाट उठाएको थियो । हाम्रो प्रतिस्पर्धा पुराना पञ्चहरूसँंग थियो । गुणराज पाठक भेटवालजीका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी थिए । मेरा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी कमल थापा थिए ।
त्यो बेला उनी राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको अध्यक्ष भएकाले उनलाई ‘मण्डले’ भनिन्थ्यो । गणतन्त्र आइसक्दा समेत राजतन्त्रको वकालत गर्ने खुंखार मण्डलेसँंग म पञ्चायतमा चुनाव लडेको थिएँ । उनले कब्जा गरेरै चुनाव जिते, मलाई हराइयो । भेटवालजीले भने चितवनबाट जित्नुभयो । पार्टीको तर्फबाट जनपक्षीय उम्मेदवार बनेकामध्ये भेटवाल, झापाका द्रोण आचार्य, काठमाडौंका पद्यरत्न तुलाधर, इलामका नोबल केबी राई र कास्कीका सोमनाथ प्यासीले चुनाव जित्नुभयो । हामीसँंग गठबन्धन गर्नेमध्ये चितवनका भीमबहादुर श्रेष्ठ, मकवानपुरका रूपचन्द्र विष्टले र परशुराम खापुङले पनि जित्नुभयो ।
हाम्रो तर्फबाट जित्ने पाँच जनाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेर मसिनो ढंगले पार्टीको पक्षमा काम गर्नुभयो । त्यो बेला खालि लुकेर सेल्टरमा बसेर संगठन गर्नुपथ्र्यो । तर जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा उहाँहरूले जितेपछि पार्टी विस्तारमा त्यसले ठूलो सहयोग गर्‍यो । २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनाव र स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरू खडा भएपछि पार्टीको गुणात्मक विकास भयो । हामीले पञ्चायतको उम्मेदवारका नाममा सिधै सभा गर्न पायौं । चुनावमा उठेका उम्मेदवारलाई प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैनथ्यो । त्यसैले चुनावी सभाहरूमा ठाडै बोल्न पाइयो । बहुदलका पक्षमा भाषण गर्ने अवसर मिल्यो । तिनै सभामा सहभागी हुनआएका व्यक्तिहरूले बहुदलका पक्षमा ताली पड्काउने, सिठ्ठी बजाउने गरेको देखिन्थ्यो । अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूसंँग पछि सम्पर्क गरेर हामी संगठन विस्तार गथ्र्यौं । जनपक्षीय उम्मेदवार बनेपछि जिते पनि हारे पनि हाम्रा समर्थक बढ्दै गए ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र भेटवालजीहरूको भूमिका उल्लेख्य हँुदै थियो । पञ्चायत सदस्यको हैसियतमा विकास निर्माण लगायतका विषय स्वाभाविक नै थिए । तर भेटवालजीले भने राजनीतिक आवाज उठाउने थलोको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो । उहाँले पञ्चायतको विरोध गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा राष्ट्रिय पञ्चायतममा स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । उहाँले पञ्चायतलाई चुनौती दिएपछि पञ्चायतइतर विचार राख्ने तत्कालीन मिडियाहरूले त्यसको व्यापक प्रचार गरे । साप्ताहिक विमर्श लगायतका पत्रिकाहरूले राम्रो स्थान दिए । हाम्रो तर्फबाट गएका पाँचजना मध्ये सबैभन्दा प्रस्ट ढंगले भेटवालजीले चर्कोसँग आवाज उठाउनुहुन्थ्यो । पद्यमरत्न तुलाधरले घुमाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो ।
भेटवालजीमाथि पक्रने, जेल हाल्ने, निलम्बन गर्ने लगायतका हर्कत पनि भए । तर उहाँले पञ्चायत विरोधी कुरा गर्दा पद खुस्किन्छ कि, जेल हाल्छ कि, दु:ख देला कि भन्ने पर्वाह गर्नुभएन । राष्ट्रिय पञ्चायतको पाँचै वर्ष बहुदलको पक्षमा लडेर बस्नुभयो ।
पञ्चायतको खुलमखुल्ला विरोध गर्दा धेरै धाकधम्की र प्रलोभनहरू पनि आउँथे । उहाँलाई पनि केही धम्की र धेरै लालचका कुराहरू आए । राजा र सेना पक्षका मान्छेहरूले लोभलालच देखाउँथे । किन जोखिम मोल्नुहुन्छ भन्दै धम्क्याउँथे । ‘दरबारसँंग भेट्नुहोस्, राजा खराब होइबक्सन्न’ राजासँंग जोड्ने खालका प्रयास पनि भए । तर उहाँ त्यस्तो कुनै प्रलोभनमा पर्नुभएन । आफ्नो निष्ठा नछोडी बस्नुभयो ।
२०४८ को चुनावपछि २०५६ सम्म हामी संसदमा सँंगै भयौं । अहिलेसम्मका माननीयमध्ये जनताको कामका लागि अलिकति पनि थकाइ र झन्झट नमानी २४ घन्टा काम गर्ने सीमित व्यक्तिहरूमा उहाँ पर्नुहुन्छ । २०५६ को चुनावमा भने उहाँ पराजित हुनुभयो । पराजित भए पनि निर्वाचितहरूभन्दा बढी उहाँ खट्नुभयो । पछिल्लो समय अस्पतालमा भर्ना हुनु अघिसम्म पनि उहाँ नियमित राजनीतिक काममा संलग्न हुुनुहुन्थ्यो ।
सांसदमा उहाँको राम्रो भूमिका थियो । २०४८ देखि नै हामी लेखा समितिमा पनि रह्यौं । २०५६ को आसपासमा उहाँ समितिको सभापति पनि हुनुभयो । । प्रतिक्षलाई सभापति दिने क्रममा उहाँले छोटो समय त्यो भूमिका पाउनुभएको थियो । त्यतिबेला लेखा समिति सभापतिको प्रभावकारी भूमिका हुन्थ्यो, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो हतियार थियो त्यो । ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू लेखा समितिले बाहिर ल्याएको थियो । लेखाको काम देखेर अन्य समितिहरू रिस गर्थे । लेखाले काम गर्ने भएकाले पत्रकारहरू पनि त्यही समितिमा झुम्मिन्थे । अन्य समिति बैठकको मतलव हँुदैनथ्यो । त्यही कारण पत्रकारहरूलाई समितिमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । केही समय बन्द गर्ने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको हामीले विरोध गर्‍यौं । सभापति भएको बेलामा उहाँले जनसरोकारका कुरा बाहिर आउन दिनुपर्छ भन्दै समितिमा पत्रकारहरूको प्रवेशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने अडान लिनुभयो । र पछि खुल्ला भयो ।
जनताका काममा उहाँ अत्यन्तै खट्नुहुन्थ्यो । उहाँले राम्रो काम गरेकैले स्विस सरकारले उहाँकै विश्वासमा चितवनमा अर्बौंका परियोजना सञ्चालन गर्‍यो । २०५१ मा आएको बाढीले सौराहा, लोथर क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसमा बाँध बाँध्ने, सिंचाइ गर्ने, पुल निर्माण गर्ने लगायतमा काममा स्विस सरकारले उहाँकै विश्वासमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्‍यो ।
उहाँ अत्यन्त दयालु पनि हुुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत कालमा मुलुकभरबाट बिरामी भएर राजधानी आउने पार्टी निकट व्यक्तिहरू उहाँकामा पुग्थे । उनीहरूलाई आफ्नै घरमा राखेर उपचार गराउने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सकेसम्म सहयोग जुटाइदिने काम गर्नुहुन्थ्यो । कुनै–कुनै बेला त १५/२० जनासम्म बिरामी पनि उहाँका घरमा हुन्थे । घरको बरन्डामा पनि सुतिरहेका हुन्थे । बहुदल आएपछि भने अन्य नेताहरू पनि भएकाले उहाँलाई अलिक सहज भयो । तैपनि चितवनबाट आएका बिरामीलाई चाहिँ अस्पतालमै पुगेर भेट्ने, सकेको सहयोग गर्ने गरिराख्नुभयो ।
उहाँ भूगिगतकालदेखि नै पार्टीको संगठन निर्माणमा लाग्नुभयो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएपछि पनि भूमिगत नेताहरूलाई सेल्टर दिने, माननीयको व्यानर प्रयोग गरेर भूमिगतलाई बोकेर हिँड्ने गर्नुभयो । पार्टीभित्र उहाँ केन्द्रीय लेखा आयोगको दुई कार्यकाल सदस्यसम्म बन्नुभयो । २०५४ को पार्टी विभाजनमा उहाँ विचलित हुनुभएन । दबाबका बाबजुद पनि पार्टीको मूलधारमै बसेर काम गर्नुभयो ।
पछिल्ला कालखण्डमा भने उहाँले पार्टीले अलि वास्ता नगरेको जस्तो महसुस गर्नुभयो । २०६४, ०७० र हालैको तीनवटै चुनावमा उहाँले सांसद हुने मन गर्नुभएको थियो । उहाँ प्रोस्टेट क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो । डाक्टरले २ वर्षसम्म जानसक्ने भनेको थियो, तर उहाँ उच्च मनोबल भएको व्यक्ति भएकाले नौ वर्षसम्म थप बाँच्नुभयो । उहाँ बिरामीसमेत भएकाले उहाँको उपचारमा ठूलो रकम लाथ्यो । धेरै खर्च पनि गर्नुभयो । सरकारबाट केही थोरै सहयोग भयो । तर सांसद नै भएको भए राज्यले नै उहाँको उपचारमा वैधानिक रूपमा सहयोग गर्नसक्ने थियो । यसैका लागि पनि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँलाई सांसद बनाउन हामीले पनि पहल गर्‍यौं । तर ६०१ जनाको संसद हँुदा र समानुपातिकबाट धेरैलाई सांसद बनाउँदा उहाँ जत्तिको योगदान भएको व्यक्तिलाई समेटिइएन । २०७० को चुनावमा त उहाँले चुनावमा लड्ने निकै पहल गर्नुभयो । तर पार्टीले उठाउन तयार भएन । यो चाहिँ उहाँको हकमा अलिक खड्किने विषय हो ।
उहाँ आशिर्वाद होइन, आन्दोलनबाट उठेको नेता हुनुहुन्थ्यो । २०३६ पछि सबै आन्दोलनका मोर्चामा उहाँ सधैं अग्रपंक्तिमै रहनुभयो । उहाँलाई २०४६ मा आजीवन कारावास हुनेसम्मको मुद्दा लाग्यो । तर डराउनु भएन, थाक्नु भएन । पार्टीभित्र अनावश्यक पद र पहुँचको घमन्ड देखाउनु भएन । पार्टीमा अतिरिक्त शक्तिको अभ्यास पनि गर्नु भएन । एमाले पार्टीभित्र वामदेव गौतम पहिलेदेखि नै शक्तिशाली हुुनुहुन्छ । पारिवारिक रूपमा भेटवाल गौतमका सम्धी हुनुहुन्छ । त्यो नातालाई उहाँले कतै प्रयोग गर्नु भएन । त्यसका कारण अतिरिक्त फाइदा लिनु भएन । फाइदा लिन खोजेको भए वामदेवजी चाहँदा उहाँ पछिल्लो कालखण्डमा सांसद हुनुहुन्थ्यो होला ।
नेताहरूको चरित्र, खानपान, संगतसँंग जोडिएका धेरै नराम्रा विषय बाहिर आउने गर्छन् । कतिपय नेताहरूको कमजोरी पनि छ । तर चरित्र, खानपान, संगतसंँग जोडिएका कुनै कमजोरी उहाँमा देखिएन । आर्थिक विषयमा उहाँ सधैं सफा नै रहनुभयो । इमानदार भयो भने मान्छे मरेर पनि अमर हुन्छ । कैयौं जनप्रतिनिधि, नेताहरूहरू आउँछन्, जान्छन् । खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेका कारण जनताको विस्मृतिमा पुग्छन् । तर भेटवालजीले सधैं स्मृतिमा रहने जननेताको रूपमा अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक सहयोद्धाप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
सांसद खतिवडासँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०७:५९
तपाईंहरू एमालेसँग मज्जाले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ । उनीहरूको प्रतिपक्षीय ज्ञान राम्रो छ ।
चैत्र २४, २०७४ विमल निभा
काठमाडौँ — अन्तत: कांग्रेसीहरू प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसको बानी एवं अभ्यास भने उनीहरूलाई पटक्कै छैन । त्यसकारण एक प्रकारको असजिलो महसुस हुनु स्वाभाविक नै छ । फेरि यो कुनै रुचिकर कुरो पनि त होइन ।
अर्थात सत्तापक्षबाट एकाएक प्रतिपक्ष हुनु यही सन्दर्भमा मलाई एक परिचित कांग्रेसी सांसदले पहिले जोडले अनि विस्तारै भने, ‘हेर्नाेस्, हामी कांग्रेसीहरूलाई केवल सत्ताको विलकुलै एकतर्फी अनुभव छ, अब कसरी प्रतिपक्षी भएर काम गर्ने ?’
‘माननीयज्यू, तपाईहरू यसको समुचित ट्रेनिङ किन लिनुहुन्न ?’ मैले एक नमागिएको सुझाव उनीछेउ राखेंँ, ‘यही समयानुकूल काम हुनेछ ।’
‘कस्तो ट्रेनिङ ?’ उनले उत्सुक भएर टाउको उचाले ।
‘यही, एउटा असल प्रतिपक्ष कसरी बन्ने, प्रतिपक्षको सरल तथा सुगम मार्ग के हो, के गरी सहजै प्रतिपक्षी हुन सकिन्छ, प्रतिपक्षको सौन्दर्यशास्त्र कस्तो हुन्छ, सबल प्रतिपक्षको प्रबल उपायहरू के–के हुन्, आखिरमा प्रतिपक्ष भनेको हो के, आदि–इत्यादि ।’ मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट गरें, ‘यिनीहरूका विषयमा ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ, माननीयज्यू ।’
‘यस्तो ट्रेनिङ कोसित लिने ?’ उसको अनुहार उज्यालो भयो ।
‘हेर्नोस माननीयज्यू, यस प्रकारको ट्रेनिङ अरू कोसित लिन सकिन्छ ?’ मैले भनेंँ, ‘उही नेकपा एमालेसित । तपाईहरू एमालेसँग मज्जाले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ । उनीहरूका प्रतिपक्षीय ज्ञान राम्रो छ । त्यसैले नेकपा एमालेसित मिलेर यस सम्बन्धी सभा, सेमिनार, गोष्ठी आदि पनि आयोजित गर्न सकिन्छ । मेरो मतलव के हो भने प्रतिपक्षको प्रत्येक पक्षबारे एमालेहरू व्याख्या–विश्लेषण गर्न सक्षम छन् । यसको पुरै लाभ किन नउठाउने माननीयज्यू ?’
‘के तपाई मसँग ठट्टा गरिरहनुभएको छ, बन्धु ?’ उनी सहसा रुष्ट भए ।
‘होइन, म त एउटा कुरा गरिरहेको छु, माननीयज्यू ।’
‘यस्तो नचाहिँंदो कुरा नगर्नाेस् ।’ उनको स्वर भारी भयो, ‘नेकपा एमालेका मानिसहरूले त हामीलाई प्रतिपक्षी बनाएका हुन् ।’ उनी दु:खी भएका थिए, ‘क्या मोजले हामी सत्तामा पल्टेर आराम गरिरहेका थियौं †’ एकछिन रोकिएर भने, ‘हेर्नाेस्, हेर्दाहेर्दै हामी सत्तापक्षबाट प्रतिपक्ष भयौं ।’ उनको आवाजमा निराशा थियो, ‘वास्तवमा हाम्रो यस्तो कुनै प्रयास र इच्छा थिएन । तर के गर्ने, त्यसै प्रतिपक्षी बनाइदिए ।’ र निराशाको छेउमा पुगेर भने, ‘अब बनाएपछि बन्नैपर्‍यो ।’ उनको स्वर चर्काे भयो, ‘तपाई नै भन्नोस्, त्यस्तासँग के ट्रेनिङ लिने ?’ उनी पुरै क्रोधमा थिए ।
‘तर प्रतिपक्षको समग्र अनुभव त नेकपा एमालेसँग नै छ, माननीयज्यू’, मैले भनेँ, ‘के गर्न सकिन्छ ?’
‘जे भए पनि हामी एमालेसँग ट्रेनिङ लिन्नौं ।’
‘एक पटक फेरि सोचेर हेर्नाेस् ।’
‘राम्ररी नै सोचिसकेंँ बन्धु ।’
‘के सोच्नुभयो, माननीयज्यू ?’
‘हेर्नाेस्, अहिले नेकपा एमाले सत्तापक्ष भइसकेको छ ।’ उनले सुस्तरी भने, ‘हाय ! जुन ठाउँमा पहिले हामी थियौं । हाम्रो प्यारो पार्टी नेपाली कांग्रेस ।’ उनको स्वर चर्कियो, ‘अब सत्तापक्षले प्रतिपक्षको ट्रेनिङ कसरी दिन्छ ? यो त मिल्दै मिल्दैन नि !’ र एक्कासी गम्भीर भए, ‘नेकपा एमालेले हामीलाई ट्रेनिङ दिन सक्दैन बन्धु ।’ उनको भनाइमा दृढता थियो ।
‘दिन सक्छ, माननीयज्यू ।’
‘दिनै सक्दैन ।’
‘मलाई त सक्छ जस्तो लाग्छ, माननीयज्यू ।’ म आफ्नो कुरामा अडेको थिएँ ।
‘कसरी दिन सक्छ बन्धु ?’ उनले मेरो आँखामा हेरेर भने ।
‘तपाईहरू नेकपा एमालेका नेताहरूसँग यो सोध्न सक्नुहुन्छ– यसरी अकस्मात प्रतिपक्षबाट कसरी सत्तापक्ष हुन पुग्नुभयो ? यो असम्भव के गरी सम्भव भयो ? नेकपा माओवादीहरूलाई फकाउने पद्धति के हो ? के कमरेड प्रचण्डहरूलाई आफूतिर तान्ने कुनै खास तरिका छ ? मधेसी पार्टीहरूका उपेन्द्र यादवहरूलाई अलमल्याएर राख्ने अचुक उपाय के हो ? इत्यादि । यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जसको उत्तर केवल एमालेसँग छ । हो, ट्रेनिङको अवधिमा यसैको खोजी गर्नाेस् ।’
‘के उत्तर प्राप्त हुन्छ त बन्धु ?’ उनको शंका समाप्त भइसकेको थिएन ।
‘यो तपाईहरूका शिष्यजनित नम्रता र एमालेको तमाम गुरुतामा निर्भर गर्छ ।’ मैले भनें, ‘म के भन्न सक्छु ?’ एक छिनपछि फेरि भनें, ‘प्रयास गरेर हेर्नमा कुनै नोक्सानी भने छैन । म त भन्छु, तपाईहरू आजैदेखि यो मार्गमा हिँंड्न थाल्नोस् ।’ मैले उनको अनुहारमा हेरें, ‘हिँंडे पुगिन्छ पनि ।’ र अन्त्यमा आफ्नो आवाजको भोलुमलाई बढाएर भने, ‘अन्य कुनै मार्ग छैन, माननीयज्यू ।’
‘हुन त तपाईले भनेको ठिकै हो । तर एमालेसँग ट्रेनिङ लिने अनुमति हाम्रो पार्टीले दिने छैन । के गर्ने ? अब सत्तापक्षमा जाने सवाल भएकोले ट्रेनिङ लिनुपर्ने त हो । तर एक कांग्रेसी भएको नाताले यो मलाई मञ्जुर छैन । कसरी एमालेका मानिसहरूसँग ट्रेनिङ लिने बन्धु ? हामी एमालेसँग ट्रेनिङ लिन्नौं । यो कदापि हुन सक्दैन । म कुनै पनि एमालेसँग ट्रेनिङ लिँंदै लिन्न ।’
‘के त्यसो भए, आफ्नो प्रिय सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षीको सिटमै राखिराख्ने त ?’ मैले उनको जोशमा ब्रेक लगाउन खोजेंँ ।
‘हो, यसले त बढो अप्ठ्यारो हुने भयो । हाम्रो रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, प्रकाशमान सिंह, मिनेन्द्र रिजाल, गोपालमान श्रेष्ठ आदिलाई प्रतिपक्षी भएको कसरी हेरिरहने ? यसले प्रत्येक कांग्रेसीको आत्मा रुनेछ । यो भन्दा ठूलो पीडा अरू कुनै हुन सक्दैन । र फेरि हाम्रा विदेशी मित्रहरूले हामीलाई के भन्नेछन् ? यसरी विश्वसामु मुख देखाउन नै गाह्रो हुनेछ । किनभने कांग्रेसीहरूलाई प्रतिपक्षी हुन सुहाउँदैन । हामीले कसरी प्रतिपक्ष भइरहने ? यो त नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि लाजमर्दाे कुरा हो । हामीले सत्तापक्ष हुनैपर्छ । यो नभई हुन्न । तर यसको लागि एमालेसँग कसरी ट्रेनिङ लिने बन्धु ? खोइ, के गर्ने र के नगर्ने !’ उनी दुवै आँखा चिम्लेर चिन्तन गर्न थाले । म चुप लागेर कांग्रेसी सांसदलाई हेरिरहेको थिएँ । यो चिन्तन–मननको प्रक्रिया निकै लम्बिएकोले म उनलाई त्यहीं छाडेर विस्तारै अघि बढेंँ ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०७:५६